For Women to Beware of Married Life – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on2September 2009 17 February 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction
11 thoughts on “For Women to Beware of Married Life”
ဟုတ်တယ်။ စဉ်းစားရမယ်။ တာဝန်တွေယူနိုင် မယူနိုင်ဆိုတာရယ်။ ဘ၀ကို မြှပ်နှံနိုင် မမြှပ်နှံနိုင်ဆိုတာရယ်။ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူနိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။ ပြီးမှ သူများတာဝန်ကို ထမ်းဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်။
ဒါကိုဖတ်ပြီး တော်တော်များများ အမျိုးသမီးတွေ အပျိုကြီးဖြစ်လောက်တယ်း)
အစွမ်းအစရှိတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေပဲ အပျိုကြီးဖြစ်ကြတာ။
18 September 2009 at 9:16 am
ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေကို ခဏခဏဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..။ မိန်းကလေးတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်..။
Thantsin Phyoe says:
ရေးထားတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင် မိန်းခလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုဖို့တော်တော်စဉ်းစားရမှာပဲ… တကယ်တမ်းက နားလည်မှုသာ အဓိကပါဗျာ… အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းကိုအကဲခတ်လေ့လာပြီး သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်… ရေးထားသလိုသာဆိုရင် တသက်လုံးယောက်ျားမယူပဲ အပျိုလုပ်သင့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများပဲဗျ…
အပေါ်က စာကို စာဖတ်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ အလျှင်မြန်ဆုံးဝေဖန်ရရင် “အိမ်ထောင်ပြုသင့်သလား? အဲသလိုများ မေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့တိုက်တွန်းမိမှာ ဖြစ်သလို မိန်းမဆိုရင် အိမ်ထောင်မပြုဖို့အားပေးမိမှာပါပဲ။” ဆိုတဲ့အပိုင်းကို ဗဟိုပြုရေးသားခြင်းပဲဗျ… အဲ့ဒီအတွက် ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ အချက်အလက်ပေးထားပြီး ထောက်ပံ့ပေးထားတာပဲဗျ…
မိဘရှိတဲ့သားသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီမိဘတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်မှုပြုခြင်းကို ရှုံ့ချရေးသားထားတာကိုဘယ်လိုမှကြည့်မရနိုင်ပါဘူး… ဒါ့အပြင် အဖေရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အဖေဟာ ဒီလောက်အထိ စိတ်ဓာတ်သေးသိမ်မယ်လို့ ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်… နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ အထက်ပါစာအကြောင်းအရာတွေဟာ သာမန်လူ့စိတ်မှာဖြစ်ပွါးတတ်တဲ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတချို့ကို အလွန်အကျူး အကျယ်ချဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအမှုကို အပုပ်ချရေးသားထားတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်…
ကျနော်ပြောပြီးသလို နားလည်မှုနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုက စာရေးသူထောက်ပြတဲ့အချက်တွေထက်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ… ပိုပြီးသေချာတာပြောရရင် စာရေးသူရဲ့ ဒီစာပိုဒ်နဲ့ပြောပါ့မယ် “အခု ကျွန်တော် ရေးလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင် မပြုရေးဆိုတဲ့အဆြိုပဆွေးနွေးချက်ဟာ မဖြစ…်မနေ အိမ်ထောင်ပြုကို ပြုတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူများအတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုရ ကောင်းနိုး၊ မပြုရ ကောင်းနိုးဖြစ်နေသူတွေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အိမ်ထောင် မပြုချင်လှပေမယ့်လူပြောသူပြောနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင်များ ကောင်းမလားလို့တွေးနေသူတွေအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက စဉ်းစားစရာရအောင် အကြံပြုဆွေးနွေးလိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။” သေချာစဉ်းစားရင် လူသားအများစုဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ချီတုံချတုံဖြစ်တတ်ကြပါတယ်… အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ အပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်ခါနီးမှာ ပိုလို့တောင်ဖြစ်တတ်ကြပါသေးတယ်…(ဒီနေရာမှာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အတူတူပါ) စာရေးသူလိုမျိုး ကျနော်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးရောက်ရင် စာရေးသူလိုမျိုး အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အနေထားတွေကိုပဲမပြောပဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကောင်းအဆိုးမှန်သမျှကိုသာ ရှာဖွေတင်ပြပြီး ဖြေရှင်းသင့်တဲ့နည်းလမ်းကိုပဲ ပြောပြမိမှာပါ… စာရေးသူပြောသလိုသာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့လာပြီးတိုင်ပင်တဲ့လူတွေမှာ ဘယ်လောက်တောင်ကပြောင်းကပြန်တွေဖြစ်လိုက်မလဲ… ဒါကြီးကိုဖတ်ဖူးသူတွေထဲက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုအားနည်းသူတွေဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်တောင် အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့သာယာမှုကို အနည်းနဲ့အများထိခိုက်နိုင်ပါတယ်… ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ကြီးလိုက်တဲ့စာလဲဆိုတာ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်သွားတဲ့လူတွေကို တွေ့ဖူးမှ ကြုံဖူးမှသာသိနိုင်မှာပါ… ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီစာဟာ အိမ်ထောင်ပြုမဲ့သူတွေအတွက် အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းရုံတင်မဟုတ်ပဲ… စာရေးသူစကားနားမထောင်ပဲ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်တောင် အိမ်ထောင်တစ်ခုအတွက် သံသယဆိုတာကြီးကို injection လုပ်ပေးထားတဲ့ စာကြီးသက်သက်ပါပဲဗျာ…
“တကယ့် စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်က ကိုယ့်ကိုယ်တွင်းမှာသာ ရှိတာ၊ ကိုယ့်ဘဝအမြင်နဲ့ ကိုယ်သာ ရှိတာပါ။ အိမ်ထောင်ပြုတာ၊ မပြုတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့စာသားကအမှန်ဆုံးပဲ… စာရေးသူလိုမျိုး အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်… အနှုတ်လက္ခဏာဆန်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ပဲထွက်လာမှာပါ… ဒါ့ကြောင့် စာရေးသူရဲ့ ဖြေရှင်းချက်က မိန်းခလေးတွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်ပဲထွက်လာတာပေါ့… ဒီလိုစာမျိုးကို ပြန်ပြီး ဖြေရှင်းချက်မရေးနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာကြီးငယ်အပေါင်းတို့ကိုလည်း အံ့အားသင့်မိပါတယ်…
Chit Ma Wa says:
ကျမလဲ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ပါ။ ကိုသန့်စင် ရေးထား တဲ့ စာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဟာ သာယာ ဖွယ် အတိလို့ ထင်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တွေမှာသာ ဒီလို ပြဿနာမျိုးနဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးမှာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ယောက်ထဲ နေလဲ သူ့ဒုက္ခနဲ့ သူတော့ ရှိနေတာပါပဲ။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆို တာ အမှီသဟဲပြုခြင်း အခြေခံကျပါတယ်။ ယောက်ကျားတွေက လဲမိန်းမတွေကို မှီရပါတယ်။ မတူညီခြင်း တွေ ရှိတယ်ဆို တာကို ကြိုတင်လက်ခံထားရင် ပြဿနာက သိပ်မကြီးဘူးထင်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ ဒီမိန်းမ ထိမှ နာမယ်လို့ ပြောချင် ပြောပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဆိုတာ ခံယူတဲ့ သူအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်မျိုးကို ရေးထားတာလဲ အတော် လေးကို တဖက်ဆောင်းနေပါတယ်။ စာရေးသူ အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် စိတ်ပူလို့ ရေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါမယ်။
It’s bloody true! I am facing the same things as this story… Even I read your books before marriage, I didn’t believe well and I thought that I can handle it but everything happened traditionally…
ဆရာ ​ရေးထားတာ ​ပြောထားတာ​တွေဟာ
မိန်းခ​လေးထုအတွက်​ အမှန်​တရား​ပါဘဲ။မိမိ ကိုယ်​တိုင်​လဲ အိမ်​​ထောင်​သည်​မို့ ခံစားချက်​ ထပ်​တူကျပါတယ်​။ အ​မေက​တော့ ​အမြဲ​ပြောတယ်​ဆရာ။ ခင်​ပွန်း​ကောင်း​ကောင်းမ​ကောင်း​ကောင်း သားသမီး​လေး​တွေ ပိုင်​ဆိုင်​ရတာ ကိုက ကံ​ကောင်းပါတယ်​တဲ့ ဆရာ။သမီး ​တွေကို အပျိုကြီး​တော့ မလုပ်​ခိုင်းဘူးဆရာ။ ​နောင်​အနာဂါတ်​အတွက်​ သားသမီး​လေး​တွေက အားဖြစ်​ပါတယ်​တဲ့။ ဒီပို့စ်​ကို ဖတ်​မိသူ​ယောကျာ်းသားများအာလုံး
မိန်းခ​လေးဘဝ ကို နားလည်​ပေးတတ်​​သော
Zin Nwe Win says:
ှShare လိုက်ပါတယ် ဆရာ။
Previous Previous post: Maung Wunna’s Autobiography (Volume 1)